maankiisa cagta tuke ayaa la mid ah arrowhead maankiisa. Ku bilow adigoo calaamadaynaya saddex xagal ah oo meesha loo baahan yahay. Kaxee, irbad ka dhanka khaldan loo marayo geeska hoose ee bidixda ee saddexagalka. Qaado tolmo dadab ka xaq u leeyahay inuu ka tagay iyada oo barta top, kadibna ku celi this ee koonaha midig iyo mar kale dhanka bidix ee hoose. Ku celi habkan ilaa saddexagalka waxaa gebi ahaanba buuxiyay.
Jennifer Dharka Update Qaabka→